စိတ်ဖိစီးမှုကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖြေဖျောက်ပစ်နိုင်မလဲ? - MiteLar
စိတ်ဖိစီးမှုကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖြေဖျောက်ပစ်နိုင်မလဲ?
စိတ်ဖိစီး၊ စိတ်ရှုပ်၊ အလုပ်တွေ ပိနေခြင်းသည် ကိုယ့်လုပ် ကိုင်နိုင်စွမ်းရည်ကို ကျဆင်း စေသည်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကိုလည်း ထိခိုက်စေပါသည်။ အိမ်ထောင်သာယာရေး ကိုလည်း ဖျက်ဆီးနိုင်ပါသည်။
ပစ္စုပ္ပန် ကြုံလာရသည့် ပျော်စရာ အားတက်စရာများကိုလည်း ပျော်လို့ မရတော့၊ အားတက်လို့ မရတော့တာမျိုး ဖြစ်ရပါသည်။ လူတစ်ကိုယ် ပြဿနာပုံစံတစ်မျိုး ဖြစ်တတ်ရာ ဖြေရှင်းပုံ ကလည်း တစ်မျိုးစီ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ အချို့သော အလေ့အထကောင်းများသည် လူတိုင်းကို အကျိုးပြုနိုင်စွမ်း ရှိနေပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ စိတ်ဖိစီးမှု ကင်းဝေးစေမည့် သိပ္ပံနည်းကျ ထောက်ခံထား ကြသော အချက်များကို တင်ပြသွားပါမည်။
သူများထက် စောအောင် ထပါ။
အလုပ်ကို သူများထက် အရင်ပြီးအောင် လုပ်နိုင်မည် ဆိုရင်ခံစားနေရသည့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ကျသွားမည်လား။ သူများတွေ အိပ်ကောင်းတုန်း မနက် လေးနာရီ လောက်က တည်းကထပြီး အလုပ်တွေ လုပ်နေရတာ စိတ်ကိုပါ ခွန်အား ဖြစ်စေပါသည်။
ငါက အလုပ်တွေ အများကြီး ပိုပြီးနေပြီ၊ သူများတွေက အိပ်ကောင်းတုန်းပဲ ရှိသေး ဟူသော ကျေနပ်စိတ်လေးက ကိုယ့်ဆီ စိတ်ဖိစီးမှုတွေဝင် မလာအောင် ခံတပ် သဖွယ် ပေးနိုင်သည်။
သူများထက် အလုပ်ကြိုပြီးနေသဖြင့် လူကလည်း စိတ်ပေါ့ပါး ပျော်ရွှင်ကာ တစ်နေ့တာမှာ လန်းဆန်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ လန်းဆန်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင် သဖြင့် အလုပ် အရည်အသွေး လည်းတက်ကာ ကိုယ့် လက်ရာကိုယ် ကျေနပ် ဂုဏ်ယူနိုင် သောသူ ဖြစ်လာမည်။
လေ့လာမှု စစ်တမ်းများအရလည်း စောစောထသူ များသည် လုပ်ရည် ကိုင်ရည် ပိုကောင်း ကြကြောင်း တွေ့ရသည်။ အလုပ်ထဲမှာ ပိုအောင်မြင်သူများ၊ လစာပိုကောင်း သူများ၊ ဝင်ငွေပို ကောင်းသူများကို ကြည့်လျှင်လည်း စောစောထသူက အများစု ဖြစ်ကြောင်း သုတေသနများက ထောက်ပြ ထားပြီး ဖြစ်သည်။
လူတစ်ကိုယ် ပြဿနာပုံစံတစ်မျိုး ဖြစ်တတ်ရာ ဖြေရှင်းပုံ ကလည်း တစ်မျိုးစီ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ အချို့သော အလေ့အထကောင်းများသည် လူတိုင်းကို အကျိုးပြုနိုင်စွမ်း ရှိနေပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ စိတ်ဖိစီးမှု ကင်းဝေးစေမည့် သိပ္ပံနည်းကျ ထောက်ခံထား ကြသော အချက်များကို တင်ပြသွားပါမည်။
နေ့တိုင်း ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
ကြွက်သား လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် စိတ်ဖိစီးခြင်းကြောင့် ထွက်လာသည့် အဖျက် ဟိုမုန်း ကျူရန်နိုင်းကို ချေဖျက်နိုင်သော အင်ဇိုင်းများ ထွက်လာကြောင်း သုတေသန တစ်ရပ်က ဖော်ပြ ထားပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်းသည် စိတ်ဖိစီးမှုကို ကျစေ၏ဟု တိုက်ရိုက်ဆို နိုင်သည်။
တကူးတကကြီး လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နစရာမလိုပါဘူး။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စက်ဘီး တူတူ လျှောက်စီးခြင်း ၊ လိုင်းကား စီးရင် တစ်မှတ်တိုင်လောက် ကြိုဆင်းပြီး လမ်းလျှောက်သွားခြင်း ၊ အစည်းအဝေးခန်း လူမစုံသေးလို့ စောင့်နေရချိန်မှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး နံရံကိုလက်နဲ့ ထောက်တွန်း လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပေးခြင်း စတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလဲ လုပ်နိုင်ပါသည်။
ဖေ့စ်ဘုတ် ခဏခဏ မသုံးနဲ့။
ဗြိတိသျှကို လမ်ဘီယာ တက္ကသိုလ်က လေ့လာခံ ကျောင်းသား (၁၂၄) ယောက်ကို နှစ်စုခွဲသည်။ တစ်စုကို တစ်နေ့ သုံးကြိမ်သာ ဖေ့စ်ဘုတ် ကို ခတ္တခဏ သုံးခိုင်းခဲ့ပါသည်။ နောက်တစ်စုကို ကြိုက်သလောက် သုံးခွင့်ပေးသည်။
ထိုအစုသည် မကြာမကြာလည်း ဖုန်းထုတ်ပြီး ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ဖွင့်ကြည့်ကြည့်နေကြသည်။ ဖုန်းထုတ်ပြီး တစ်နေ့ သုံးကြိမ်သာ ဖေစ့်ဘုတ်သုံးသူများသည် စစ်တမ်းကာလ တစ်ပတ် ပြည့်ချိန်တွင် ကျန်အစုထက် စိတ်ဖိစီးမှု သိသိသာသာ နည်းပါးကြောင်း တွေ့ခဲ့ရပါသည်။
လိုချင်စိတ်တွေ လျှော့ပါ။ လုပ်စရာရှိတာ ကိုသာ အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။
အကောင်းမြင်စိတ် များလွန်းခြင်းသည် လည်း စိတ်ဖိစီးမှု များအောင် ဖိတ်ခေါ်ရာ ရောက်တတ်ကြောင်း နယူးယောက် တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ ဂါဘရီရယ် အော်တီဂန်က ပြောခဲ့ပါသည်။
ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ တစ်ခု ဖြစ်လာ ရမည်ဟု အကောင်းဘက်က မျှော်လင့်ထားခြင်း၊ ဖြစ်လာသည့် ပုံကို စိတ်ကူး ပုံဖော် ကြည့်ခြင်း များသည် စိတ်အား ဖြစ်ရေး အတွက် အထောက်အကူရ သော်လည်း မဖြစ်လာ သေးတာကို စိတ်ကူးနဲ့ သာယာနေခြင်း ကြောင့်တကယ်လုပ်သည့် အပိုင်းတွင် အားလျှော့သွားတတ်ကြောင်း ပါမောက္ခ အော်တီဂန်က ထောက်ပြခဲ့ပါသည်။အခြား အစွန်းတစ်ဖက် အဖြစ် မဖြစ်နိုင်တာ၊ ပျက်စီးမှာ တွေချည်း စိတ်ထဲ ထည့်ထား ခြင်းသည်လည်း ဘာမှ မဖြစ်မြောက်အောင် ဖျက်ဆီးရာ ရောက်ပါသည်။
အကောင်းဆုံးကား ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်ရင် ဘယ်လို ပျော်ရွှင်ရမလဲ စဉ်းစား ကြည့်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ ရည်မှန်းချက် အကောင်အထည်ဖော် ရာမှာ ကျော်လွှားရမည့် အခက်အခဲ များကို စဉ်းစားပါ။ ဘယ်လို ကျော်လွှားရမလဲ အစီအစဉ်ချပါ။ ပြီးရင် ထလုပ်ပါဟု ပါမောက္ခ အော်တီဂန်က ပြောခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်မှန်းထား တာကို ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ထား ပါက နောင်အခက်အခဲများ ရှိလာလျှင်ပင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်နေကာ စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ် ခံရနည်းသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
စိတ်ဖိစီးလျှင် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်ဖို့ ခက်ပါသည်။ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မပျော်လျှင် စိတ်ဖိစီးဖို့က ပိုလွယ်သွား ပြန်သည်။ ထိုနှစ်ခု မုန့်လုံး စက္ကူကပ်ကာ ကိုယ်လည်း အမေရိုက်တာ ခံရသည့် ဂျာအေး ဖြစ်ရမည်။ သို့ဖြစ်ရာ တတ်နိုင်သမျှ စိတ်ဖိစီးမှု နည်းအောင် အထက်က အကြံပြုချက်လေး များ လိုက်နာကျင့် သုံးရပါမည်။ သို့မှသာ ညဘက်မှာ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်ကာ နောက်နေ့ အတွက် အားအပြည့်ရနိုင်ပါမည်။
Sai San Seng2021-01-08T08:04:04+00:00